Shiinaha Warshad koollo RFE / DESMODUR RFE CAS 4151-51-3 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Aragtida
Koolo labo-qaybood ah waa in loo adeegsadaa muddada ku habboon ka dib marka la geliyo ka dib marka la geliyo RFE. Dhererka mudada la isticmaali karo kaliya kuma xirna nuxurka polymer-ka ee xabagta, laakiin sidoo kale wuxuu la xiriiraa qeybaha kale ee la xiriira (Sida reisn, antioxygen, plasticizer, dareeraha, iwm.) .Marka ay ku dhowdahay mudada la isticmaali karo, badiyaa saacado yar ama hal maalin shaqo, koolo way adkaanaysaa in la shaqeeyo, dareeraha ayaa si dhakhso leh u kordha, Ugu dambayntiina, wuxuu noqdaa jelly aan la celin karin. 100 xabag tayo leh, Hydroxyl polyurethane (Xisaabta Polyurethane qiyaastii 20%), Qiyaasta RFE 4-7. Cinjirka Chloroprene (Koontada Rubber ee ku dhow 20%) , Qiyaastayada RFE 4-7.
Koolo tayo sare leh oo Isocyanate RFE ah ayaa beddeli kara DESMODURE RFE
Polyisocyanate-ka RFE waa xiriiriye wax-ku-ool ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay koollo ku saleysan polyurethane, caag dabiici ah iyo caag isku-dhafan, sidoo kale wuxuu faa'iido u leeyahay hagaajinta isku-dheellitirka qalabka caagga ku saleysan. Waxaa loo isticmaali karaa sida iskutallaabta.
Sumadda badeecada: RFE, RF
Caanaha wax soo saarka: C21H12N3O6SP
Qaybta hoose ee mugga: 465
Barta dhalaalida: 84-86 ℃
Dareere huruud-bunni ah Midabkiisu ma saameynayo xoogga isku xirnaanta.
Alaabooyinka waxaa ku jiri kara qashin lamellar ah.
750g / dhalo, 20 dhalo oo hal kartoon ah, 24 ama 30 kartoon oo ku jira hal sariir;
20kg / durbaan, 18 durbaan ama 27 durbaan oo ku yaal hal sariir;
55kg / durbaan, 8 ama 12 durbaan oo ku jira hal sariir;
180kg / durbaan, 4 durbaan oo ku wada jira sariirad
Fadlan ku kaydso weelkii asalka ahaa ee shaabadaysanaa ee ka hooseeya 23 ， ， alaabta waxaa lagu ilaalin karaa inay xasilloon tahay lix aboor.
Dhammaan alaabooyinka taxanaheennu waxay aad ugu nugul yihiin qoyaanka; Waxay soo saari doontaa kaarboon-laba ogsaydhka iyo HOL-da aan la-milmi karin marka falcelinta biyaha laga sameeyo. Haddii hawada ama / iyo iftiinka u soo gaadho, waxay dedejineysaa isbeddelada midabka ee alaabta.
Laakiin shaqada waxqabadka ah bot ayaa saameyn doonta.)
Dabeecadda halista ah, oo aad u ololi kara, waxay kicisaa indhaha, haddii la neefsado waxay sababi kartaa xasaasiyad. Taabashada joogtada ah waxay sababi kartaa maqaarku inuu qallalo ama ciriiri galo. Uumiga badeecadaha ayaa qofka ka dhigi kara daal iyo deganaan.
Hore: Desmodur RE / Isocyanate RE oo loogu talagalay xabagta CAS 2422-91-5
Xiga: CAS 69102-90-5 HTPB / polybutadiene-Hydroxyl-joojiyay oo loogu talagalay soo-saare sare oo hufan
Desmodur RE / Isocyanate RE oo loogu talagalay xabagta CAS 2 ...